Izindlela Zokupheka | Disemba 2021
Ungayithinta Kanjani Chocolate
Ukushisa ushokoledi akudingeki kube nzima! Funda ukuthi ungavutha kanjani ushokoledi ngendlela elula, ku-microwave! Konke okudingayo isitsha ne-thermometer!
I-Fondant Recipe (LMF)
Le iresiphi enhle kunazo zonke laphaya. Kulula ukwenza, kunambitheka okumnandi, akukaze kudabuke, kudabuke noma kutholakale isikhumba sendlovu. Iresiphi ethandekayo yabaqalayo.
Ungawanciphisa Kanjani Amaqanda
Ungawanciphisa kanjani amaqanda akho ekhaya ukuze unciphise ubungozi bezinto eziphilayo ezithwalwa ukudla. Ukudla amaqanda kulula kakhulu futhi kuthatha imizuzu emithathu kuphela! Amaqanda asetshenzisiwe angasetshenziswa njengamaqanda ajwayelekile.
I-Recipe ye-Glitter edliwayo
Iresiphi yezinto ezidliwayo sekunesikhathi ikhona futhi yehlukile kumasu kepha ngicabanga ukuthi lena iyona elula kunazo zonke enempumelelo enkulu yokubenyezela
UNicholas Lodge Gumpaste
Izinga lamakhono: INewb Funda ukuthi ngenza kanjani iresiphi yami engiyithandayo ye-gumpaste kaNicholas Lodge. Iphelele ekwenzeni izimbali ezinhle zikashukela.
Iresiphi ye-Watercolor edliwayo
U-Angela Nino ofundisa izivakashi weThe Painted Box ufundisa ukuthi wenza kanjani upende wamanzi odliwayo owenziwe ngokwezifiso esebenzisa umbala wokudla notshwala
Iresiphi emnyama emnyama
Izinga lamakhono: I-Newb Ukwenza i-fondant emnyama ingaba yinkohliso kepha le recipe izokukhombisa ukuthi kungaba lula kanjani!
Ukuphathwa kwerayisi Krispy (RKT)
Irayisi Cereal Phatha iresiphi yamaqebelengwane aqoshwe kanye nama-Toppers Lena iresiphi yami yokwenza ukudla okusanhlamvu okusanhlamvu kwabangenisa kanye namaqebelengwane aqoshiwe. Umehluko omkhulu phakathi kwale recipe kanye nokusanhlamvu okujwayelekile kwelayisi
Iresiphi kaFondant Rainbow Fondant
I-Recipe ye-Electric Rainbow Fondant Ufuna ukuthola uthingo olucacile lwemibala ethandekayo? Ungabe usaya phambili! Le recipe izokutholela leyo mibala kagesi kaLisa Frank oyifunayo! 6 lbs Ushukela oluyimpuphu (uhlungiwe) 3
Le iresiphi yami eyisisekelo yeshidi le-gelatin. Ngisebenzisa lokhu ukwenza amagwebu e-gelatin, amaphiko, useyili, ubukhazikhazi obudliwayo nokunye okuningi!
Ungazenza Kanjani Izimbali Zophayinaphu Omisiwe
Uzenza kanjani izimbali zikaphayinaphu ezimnandi futhi ezimnandi! Kulula kakhulu! Ngikuthandile ukwenzela la madodakazi ami iphathi yosuku lokuzalwa lwesiHawaii!
Ikhekhe Goop Recipe (ukukhishwa kwepani elenziwe ekhaya)
Uma usukwenzile i-goop yekhekhe, awusoze wasebenzisa enye into. Kulula kakhulu ukwenza, akubizi futhi kusebenza njalo ukuthola amaqebelengwane akho ukuthi awakhiphe epanini. Ungalokothi uthenge ukukhishwa kwepani futhi!
Indlela Yokugcoba Ama-Flakes Kakhukhunathi
Isifundo sendlela yokugcoba ama-flakes kakhukhunathi kuhhavini ukukhipha lokho kunambitheka kwemvelo kanye namantongomane okuvela ekwenzeni i-toast, okufana namantongomane okushwayiza.
IDwala Manje Lingumlingisi Okhokhelwa Ophakeme Kunabo Bonke Emhlabeni, ngokusho kukaForbes
IForbes isabalaze uhlu lwayo lwaminyaka yonke lwabalingisi abahola kakhulu emhlabeni, eholwa nguDwayne The Rock Johnson.
UMartin Lawrence uthi Yena noTisha Campbell Balungile Ngemuva Kokuphawula Ngecala Lokuhlukunyezwa Ngokocansi
ULawrence wenze lesi sitatimende ngemuva kwempikiswano evuselelwe mayelana nezinsolo zakhe zokuhlukunyezwa ngokocansi.
Isifundo Sekhekhe Lesikwele Esikwele
Ungayenza kanjani ikhekhe le-fondant lesikwele futhi uthole leyo miphetho ebukhali namakhona. Zonke izeluleko zami namasu wekhekhe lesikwele elingenaphutha!
njengoba kubonakala kumathoyizi we-tv r us
derek zoolander isikhungo sezingane ezingakwazi ukufunda kahle
abadlali be-nba abaphezulu sonke isikhathi
super bowl 2004 half time show
© Imininingwane ©. Wonke Amalungelo Agodliwe.